သံတွဲမြို့တွင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးမုန်းတီးမှုဖြစ်စေရန်လှုံဆော်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်(၄)ဦးဖမ်းမိခဲ့ပါသည် | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Contributor, Columnist » သံတွဲမြို့တွင်လူမျိုးရေးဘာသာရေးမုန်းတီးမှုဖြစ်စေရန်လှုံဆော်သူ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်(၄)ဦးဖမ်းမိခဲ့ပါသည်	44
Posted by than shwe mg on Jul 14, 2012 in Contributor, Columnist, Creative Writing, Mandalay Gazette, News | 44 comments
အဆိုပါ လှုံဆော်သူ (၄) ဦးမှာ မွတ်ဆလင်ဘာသာဝင်များမှာ ထုတ်ဝေသယောင်၎င်းတို့ဘာသာလှုပ်ကြံဖန်တီးထားသောစာများကို ငွေတစ်သိန်းကျပ်ဘိုး
ဆူပူမှုဖြစ်အောင်အခြားသောရခိုင်ပြည်နယ်များတွင်လုပ်ဆောင်သောသွေးထိုးမှုအတိုင်း RNDP နှင့်ဝံသာနုရက္ခိတအဖွဲ့တို့မှစိစဉ်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဂျိတ္တောကျေးရွာတွင်
ကမွတ်ဆလင်ယာင်ဆောင်ကာရေကန်ဆေးချ၊မွတ်ဆလင်ယောင်ဆောင်ကာ ဗုဒ္ဓဘာ ရွာများကိုမီးရှိယောင်ပြု မွတ်ဆလင်ကျေးရွာများသို့ပြေးဟန်ပြ အစရှိသဖြင့်နှစ်ဖက်
ရန်၊အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များကိုနှင်ထုတ်ရန်နှင့် ၄င်းတို့ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လုယုရန်၊ရခိုင် တပ်ထူထောင်ရန်နှင်အလှူရှင် များ၏အလှူငွေများကို အပိုင်စီးရန်ကြိုပမ်းမှုဖြစ်ပါသည်။
than shwe mg has written3post in this blog.
View all posts by than shwe mg →	Blog
cobra says: ဘာတွေလဲကွာ……….
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ယုံဒယ်ပေါ့.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1252
ဘဲဥ says: ယုံယုံ ယုံဘူးဆိုပတ် ဘူးဆိုပတ်
may flowers says: ဒီသတင်း သေချာလား၊ အမှန်လား????????????????????????????????
ဘရားသား says: လုပ်ကြံ လန်ကျုတ် ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: မှန်သင့်သလောက်မှန်ပါ၏။သို့ သော် —–ပြဿနာကိုခေါင်းအေးအေးဖြင့်
နွေဦး says: acG;rom; ukvm;awG တသက်လုံးလိမ်နေတာဘဲ…
Oo Oo says: ဖတ်ရတာ .. တမျိုးပဲ..သတင်းလိုလို အတင်းလိုလို
အောင် လ says: မင်းအမေလင်တွေက ပြဿနာဖြစ်အောင် စာတွေလိုက်ဝေနေတာဘာ။မင်းလဲ ချီးစားတဲ့ဥဏှောက်နဲ့ ကောင်ပါလားဝေး။စာတွေ ဝေတာ နင်လဲ
Oo Oo says: အထီလား..အမလားမသိတဲ့အောင်လရေ
အောင် လ says: Pyae Zaw Phyo
than shwe mg says: ကားပိုင်ရှင်က(က)ညီမင်းခန့် (ဘ)ဦးသိန်းညွန့် ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာ ၁၁/သတန(နိုင်)၀၇၃၁၀၀ (ပ)နှစ် မြန်မာစာ အမှတ်(၆)ရပ်ကွက် ဇီဇ၀ါလမ်း သံတွဲ့ မြို့ဖြစ်ပါတယ်၊ ကုလားမဟုတ်ပါဘူး၊
Was this answer helpful?LikeDislike 13
ဖိုးကြက်တောင်@badminton says: ပြဿနာဆိုတာဖြစ်ရင် လူတွေအမြောက်အများဒုက္ခရောက်တယ် ဘယ်လူမျိုးဘဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်ဘာသာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကပ်ဘေးတခုဆိုက်ရောက်လာရင် အတူတူခံစားကြရတာဘဲ အေးအတူပူအမျှအတူတကွနေထိုင်ကြဘို့သင့်ပါတယ် တဦးကိုတဦး ဘာသာတခုကနေတခုကို လူမျိုးတမျိုးကနေတမျိုးကို အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာတွေဟာ လူမျိုးရေးဘာသာရေးရဲ့တရားစစ်တရားမှန်တွေမဟုတ်ဘူး http://www.facebook.com/groups/thantwe.budda.service မှာ အထက်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဖတ်ရတဲ့ခါစိုးရိမ်စိတ်တခုဝင်လာတယ် အရင်တုန်းကသံတွဲမြို့မှာ နာရေးသာရေးအတူတကွ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဆောင်ရွက်ကြတယ် စေတီပုထိုးတွေ ဗလီတွေတည်ဆောက်တဲ့အခါလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီကြတယ် တယောက်နဲ့တယောက် ဘာသာရေးစော်ကားတာတို့လူမျိုးရေးစော်ကားတာတို့မရှိကြဘူးအားလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ အခုဒီအစဉ်အလာကို ဖျက်ချင်သူတွေပေါ်လာပြီလား အမုန်းမီးတွေ ငြိမ်းအေးပါစေ လူအပေါင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ရှိပါစေ ဘေးရန်ခပ်သိမ်းကင်းဝေးကြပါစေ သောကခပ်သိမ်းကင်းဝေးကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းအေးကြပါစေ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့ပါ၏ သတ္တ၀ါအပေါင်း ဒုက္ခအပေါင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ
နတ် ကလေး says: ဖိုး ကြက်တောင်လို လူတွေ အများ ကြီး ရှိဖို့လို ပါတယ် မလိုတစ်မျိုး လိုတစ် မျိုး လူတွေ များနေတယ် ခုဟာက ဖမ်း မိ လို့ပေါ်တာ မဖမ်း ဘဲ ဖြန့်နေ ပျံ့ နေ တဲ့ စာ တွေ ဗီ ဒီယို တွေ က အများ သားပဲ တချို့ ဆို ညမထွက် ရတာကိုတောင် ညဘက် အိမ် ခေါင် မိုး ဂဲ ကျ တယ်လို့ပြောတဲ့ သူရှိသေး အတော် ဆိုး တဲ့ လူမိုက်တွေ ပျက် စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း လိုလားသူတွေ ပါ
than shwe mg says: အေးဗျာ ၊ဘာသာတွေထဲ့ရေးရတာတော့မကောင်းပါဘူး ၊ဒါပေမယ် ပေါ်လဆီနဲ့တိုက်နေလို့၊
Oo Oo says: ဟုတ်ပါတယ်..ကျနော်တို့သည် သံတွဲမြို့လေးကိုအေးချမ်းစေချင်သလို..မြန်မာတစ်ပြည်လုံးကိုလည်း
စောင့် ကြည့်သူ says:ံသံတွဲကစကားစိုမယုံတော့ဘူး။အာလူးဘူးသီးဘဲ။
ဘရားသား says: အပျင်းပြေသဘောမျိုး ဖတ်ကြည့် အကောင်းဆုံး
than shwe mg says: စောင်ကြည့်သူ စိုလားညှောင့်လားမသိဘူး
Shwe Phyu says: What is this kalar posting on MG??? Is thatanew style of another make up story made by kalars??? You can post whatever you want but our Govt has clearly mentioned that we’ll not accept you kalars. Stop bullshitting….
same kyaw says: အသိသာကြီး။မယုံရေးချ မယုံ
Gipsy says: ရန်ပြုတတ်သော သူတို့၏အလယ်၌ ရန်မပြုဘဲ ချမ်းသာစွာ ငါတို့နေကုန်၏…..၊
ငါတို့ နေကုန်၏…..၊ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 909
နွေဦး says: acG; ukvm; များအဲသလောက် နားလည်နေရင် အဲသလို ဖြစ်မလာဘူး ..
hnin sai says: ရခွေးခွေးရူး ခေါ်နွေဦး
နွေဦး says: ကုလားချင်းတူပေမဲ့ လူတိုင်းလက်ခံတဲ့သူနဲ့
ချာလီဂဇက်ဒလဝမ် says: အိုဘယ့်လူသားများ -
အမိ၊ အဖ မဆုံးမခဲ့ လေလျော့သလား -
အရုပ်ဆိုး အကျည်းတန်လွန်းပါတယ် -
လူပူလေး says: မယုံသူများ၊မင်္သကာ သူများ သံတွဲလာပြီးလေ့လာပါ။ဘူးပိတ်ငြင်း တတ်တယ်၊ဖင်ပိတ်
ချင့် ယုံလိဖန် says: ဒီမယ် ဒီမယ်
ချင့် ယုံလိဖန် says: စီကောင်တွေ အားကီး ချုူပ်လယ်၊ ဝတို့လို အေးဆေးစီးပွါးရှာနေပါလား ။
phoekhwarchay says: အေးဝေး ငါလိုးမသားတွေရေ မှတ်သာထားလိုက်စမ်း။ငါတို့ က ပြောလိုက်၊ဆိုလိုက်ရင် အဆဲမပါ မပြောချင်ဘူး။
Oo Oo says: အယ်.. သံတွဲမြို့က ပညာတတ်တွေပေါတယ် ဆိုတာယုံသွားပြီဗျာ..
ဝရမ်းပြေးဘခက် says: ဟေ့ နို့နံ့မစင်တဲ့ တောသားတွေ မင်းတို့ တော်တော့ရင်ကောင်းမယ် ၊
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု says: ဟေ့လူတွေ ဘာဖစ်နေဂျဒါလဲ လီးဖစ်နေဂျဒါလား :D
ဘင်္ဂါလီ တစ်ဦး says: အေး သန်းရွှေရုပ်နဲ့ ကောင် မင်းတစ်ယောက်ကိုတော့ လေးစားတယ်ကွာ။
ဝဲစားတွေ (၁)သံတွဲ ရဲစခန်း-၀၄၃၆၅၂၄၆
ချင့် ယုံလိဖန် says: အာဝါဒါး ဘာညာသာရကာ လာပြောနေနဲ့
မာလိန်မှုး says: ဟို ၃ ယောက်က ဟို ၁ ယောက်ကို ဟိုဥစ္စာပြုတယ် ၊
အမေ့သား -ကြောင်ပါး says: တက်လာလိုက်ရင်သံတွဲသတင်း ကအထူးအဆန်းချည်းပဲ ဒီစာတွေကပွနေတာ တော်တော်ကြာပြီ ဘယ်သူကစဖြန့်တယ်ဆိုတာကိုတော ဘုရားပဲသိလိမ့်မယ် ကဲ…ကောင်းတယ်ထင်ရင်ဆက်သာဒူးကြပေရော့ ဘာမှလည်းမပြောချင်တော့ဘူး သံတွဲသားတွေလည်း တော်တော်အပြောခံနေရပြီ ရှက်ဖို့တော့အကောင်းသား အဟီးးးးးးးးးးးး
Lwin Aung says: It is not rude place. If you are not our nationality, get out from our country.
tharbaw says: သံတွဲ့သားတွေ ဆိုပြီး ၀ါးလုံးချီးသုတ်မရမ်းပါနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ ။ကျနော် ကြည့်နေတာ ခင်ဗျားတို့ တော်တော်လွန်နေဘီ ။အပုတ်ချနေတာ ရပ်ပေးပါ။အေးဆေးနေတဲ့မြို့ ကို
Guest says: ဒီပို့စ်ရေးတဲ့ ကောင်ဟာ မူဆလင်ကုလား၊ ဘာသာရေးမုန်းတီးမှုကို ဖန်တီးချင်တဲ့ကောင်လို့ ယူဆတယ်။ သတင်းရေးတာထက် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ထိပါးစော်ကားထားတာတွေ့တယ်။ သံတွဲမှာ မစလကုလားတွေ ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင်လုပ်ထားလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အပုပ်ချလိုပုံရတယ်။ ဒီမှာဟေ့ကောင်.. မင်းမှတ်ထားဖို့က အကြမ်းဖက်သမားဆိုတာ မင်းတို့ မူဆလင်ကုလားတွေပဲ အများဆုံးလုပ်နေကြတာ..ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူ့မေးမေး.. မူဆလင်ဆိုရင် အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ အရင်ပြေးမြင်မိကြတဲ့ လူချည်းပဲ.. ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြ .. အသေခံဗုံးခွဲလိုခွဲ.. ဟိုကိုခြိမ်းခြောက် ဒီကိုခြိမ်းခြောက်နဲ့.. ဘာသာရေးအတွက်နဲ့ဆို ဘယ်သူ့ကိုမဆို သတ်ဖို့ဝန်မလေးတဲ့ အယူဝါဒသမားတွေ… အဲဒါကြောင့် မူဆလင် ရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုရင် မငြိမ်းချမ်းတာများတယ်။.. ပြစရာမရှိတဲ့ ဘုရားကို ကိုးကွယ် မုတ်ဆိတ်တွေထား၊ ၀တ်ရုံကြီးတွေတဖားဖားနဲ့ လမ်းသလား၊ ကုလားလို့ခေါ်ရင်လည်းမကြိုက်၊ .. ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကွာ.. ကုလားဟာ ကုလား၊ အကြမ်းဖက်သမားဟာလည်း ကုလားပဲ။
than shwe mg says: Guest ဆိုတဲ့နွား သတင်းအမှန်ရေးတာကွ၊ ဘာဘာသာကိုမှမစော်ကားဘူး၊ဖုန်းနံပတ်တွေ
Khin Nwe says: Guest ပြောတာမှန်တယ်
မာလိန်မှုး says: တစ်တစ်ခွခွ အားပါးတရ ရှိလိုက်လေ မိတ်ဆွေကြီး Guest ရာ ၊
three colors says: ဒီ post ဟာ မွတ်စလင် တယောက် က တင်သော နာမည်၊နံပါတ် တွေနဲ့ ယုတ္တိတန် အောင် ရေးသား ထားသော လုပ်ကြံ post ဖြစ် ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်၊
Comments By Postမြေမျိုပျောက်ကွယ်ခြင်း - မောင် ပေ - Mr. MarGaအိပ်ပျော်နေသူများ နှိုးရခက်သည် 。。。。。。。。。 - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး``ဒေဝေါကြီး လာမှာစိုးတယ်´´ - Mr. MarGa - အရီးခင်လတ်ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - Mr. MarGa - Mr. MarGaအထူးတလည် ကျေးဇူး တင်ရှိခြင်း - Mr. MarGa - Mr. MarGaကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Lay Paiသူတို့ ရောက်လာကြတော့မည်၊ သတိသာ ထား - Mr. MarGa - KZမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - Mr. MarGaတောင်းပန်အပ်ပါသည်။ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - KZရထား ထွက်တော့ မယ် - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - မဟာရာဇာ အံစာတုံးအဟံ ပထမံ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေးသို့ ချစ်သောဖေဖေ - အရီးခင်လတ် - Phoe Thitsarသူကြီးနှင့်တကွ ရွာသူား အားလုံးသို့ ...အိတ်ဖွင့်ပေးစာ.... - အရီးခင်လတ် - Phoe Thitsarလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသို့ - အရီးခင်လတ် - မွေ့ကေသာအိပ်မက်မင်းသမီး - Phoe Thitsar - KZအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - ရွှေတိုက်စိုး - အရီးခင်လတ်နားစွန် နားဖျား ရပ်ကွက်...။ - Mobile13 - မဟာရာဇာ အံစာတုံးကျွန်ုပ်ရောက်ရှိခဲ့သော ကျတ်တို့ဌာနီ - Mobile13 - အရီးခင်လတ်ဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - ရဲစည်(ခ)စောဖွပြေး - ကြောင်ဝတုတ်Passport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - အရီးခင်လတ် -etoneရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - Ma Ei - ဦး ကျောက်ခဲမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ဦး ကျောက်ခဲ - ko pauk mandalayEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities